Baarlamaanka Dhalinyarada Soomaaliyeed oo Doortay Gudoomiye Ku Xigeenada Koobaad iyo Labaad – Goobjoog News
Goobta ay doorashada ka dhaceysay waxaa joogay mas’uuliyiin iyo marti sharaf kale, waxayna doorashada u dhacday jawi aad u degan.
Doorashad oo ku dhacday qaab gacan taag ah waxaa shir gudoominayey Gudoomiyaha Baarlamaanka Dhalinyarada Soomaaliyeed Yoonis Cabdiraxmaan Maxamed, waxaa fadhiga joogay 195 Xildhibaan oo ka tirsan Baarlamaaka Dhalinyarada Soomaaliyeed.
Gudoomiya Ku xigeenka koobaad waxaa u tartamayey Xildhibaan Guuleed Cabdi Maxamed iyo Xildhibaan Maxamed Ibrahim Beyle, Xildhibaan Guuleed oo guusha raacday waxaa uu helay 165 Cod halka Xildhibaan Maxamed Ibrahim Beyle uu helay 30 Cod oo kaliya.
Dhanka kale, Gudoomiye ku xigeenka Labaad Waxaa u tartamay Xildhibaan Xafso Cali Cariish iyo Xildhibaan Cabdiraxman Ciise, Xafso ayaa 100% ku guuleysatay kadib markii uu tanaasulay Xildhibaan Cabdiraxman Ciise.
December 11, 2014: Kalfadhigii ugu horeeyey oo uu maanlintaas yeeshey baarlamaanka dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana guddoomiye loogu doortey Yoonis Cabdiraxmaan Maxamed oo ka mid ahaa sedex musharax oo xilka kula tartamay. Illaa iyo 275 xildhibaan oo dhalinyaro ah ayaa baarlamaanka xubno ka ah, wuxuuna noqday Baarlamaankii ugu horeeyey oo ay dhalinyarada Soomaaliyeed.
Baarlamaanka Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa horay usoo dhaweeyay Xildhibaanada iyo Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyagoo ugu baaqay Wasaaradda Dhalinyarada garab xoogan hasiiso dhalinyaradaan.
Tilaabadan ayaa lagu tilmaamay mid ay dhalinyarada kula soconayaan arimaha dalkooda iyo in codkooda iyo fikirkooda la dhageysto.
Baarlamaanka Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa uu ka kooban yahay 275 xubnood, 30% waa Gabdho, Waana arday dhigato Jaamacadaha magaalada Muqdishu.